Netflix – Networks – Channel Myanmar
Marvel’s The Punisher Season (2)
Sex Education Season 1+2 (2018) အရွယ်ရောက်ပြီးသားလူတွေအတွက်တော့ဒီစီးရီကပုံမှန်18+အခန်းတွေအများကြီးပါတဲ့ဟာသစီးရီးတစ်ခုပါပဲ ဒါပေမယ့်အခုချိန်ထိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုသေချာရေရေရာရာမသိသေးတဲ့လူတွေအတွက်တော့ လိင်ပညာပေးစာအုပ်၁၀အုပ်လောက်နဲ့ညီသွားနိုင်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့နုိင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာအရလိင်ကိစ္စဟာ ဂုဏ်ယူစရာကိစ္စမဟုတ်သလိုစူးစမ်းသင့်တဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ပါဘူး အဲ့အတွက်ကြောင့်safe sexကိုတောင်သေချာမသိလို့ပြသနာတက်နေကြတာတွေလည်း အခုထိရှိပါသေးတယ် သူတို့နိုင်ငံကဆယ်ကျော်သက်တွေရဲ့sex lifeကရော ဘယ်လိုမျိုးလဲ ပြီးတော့ဆယ်ကျော်သက်တွေအဓိကပြသနာတွေကိုဘယ်လိုရှင်းရမလဲဆိုတာဒီစီးရီးမှာအကုန်မြင်နိုင်ပါတယ် ဟာသစီးရီးဖြစ်တာကြောင့်ပျင်းဖို့လည်းလုံးဝမကောင်းတဲ့အပြင်တက်သစ်စသရုပ်ဆောင်တွေရဲ့ရုပ်ရည်နဲ့ ပီပြင်မှုတွေကစီးရီးတစ်ခုလုံးကိုပြည့်စုံနေစေပါတယ် ဇာတ်လမ်းပုံစံကတော့ အိုတစ်ဆိုတဲ့ကောင်လေးဟာတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေလို့မရပါဘူး သူရဲ့အမေကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံပေးဖြစ်ပြီးသူ့နေ့စဉ်ဘ၀ကိုအဲ့အရာကအတော်သက်ရောက်နေပါတယ် မမျှော်လင့်ပဲသူတို့ကျောင်းကသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဘောကြီးချင်လို့ecee2သုံးလုံးသောက်မိပြီး အဆမတန်ကြီးသွားတာကိုမေ့ဖ်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်မလေးနဲ့အတူတွေ့သွားပါတော့တယ် ဘာလို့သောက်မိလဲဆိုတာကိုပြန်ရှင်းပြတဲ့အခါမှာတော့သုတ်မလွှတ်နိုင်တဲ့ပြသနာရှိနေကြောင်း ဆေးသောက်လိုက်ရင်သုတ်လွှတ်နိုင်မယ့်ထင်လို့သောက်မိကြောင်းပြောပြပါတော့တယ် အိုတစ်ဟာသူ့အမေရဲ့ဆွေးနွေးတဲ့ပုံစံကိုနေ့တိုင်းကြားပြီးအဲ့ကောင်လေးကိုစကားပြောပေးပါတယ် ပါလာတဲ့ပါရမီကြောင့်ပဲပြောရမလားမသိပေမယ့်သုတ်လွှတ်နိုင်သွားပါတယ် မေ့ဖ်ဟာအဲ့ပါရမီကိုသတိထားမိပြီးသူတို့နှစ်ယောက်စပ်တူလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုထူထောင်လိုက်ပါတော့တယ် အဲ့တာကတော့SEX EDUCATIONပါပဲ ဘာသာပြန်တွေကတော့ Shwe Yee Oo,Wai Zin,Linn Kyaw Swar Aung,Hein Thet Naingတို့ပဲဖြစ်ပါတယ် encodeပေးထားတာတော့sithuပါ Season 1 Episode 1 :Yoteshin / Megaup / Upstream / Userdrive Episode2: Yoteshin / Megaup / Upstream / Userdrive Episode3: Yoteshin / Megaup / Upstream / Userdrive Episode4:Yoteshin / Megaup / Upstream / Userdrive Episode5:Yoteshin / Megaup / Upstream / Userdrive Episode6:Yoteshin ...
Sex Education Season 1+2 (2018)
Devilman: Crybaby (2018-) Netflixရဲ့anime seriesများစွာထဲကမှ အတော်တော့်ကိုကြည့်လို့အဆင်ပြေတဲ့အပြင် ပုရိသအများစုအကြိုက်အန်နီမေးဖင်တုံးကြီးများကိုထည့်ထားတာမို့ကြည့်လို့အဆင်ပြေလှပါတယ် အကီရာဟာအမြဲစိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့ကွဲဘဲလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတစ်ရက်မှာတော့ သူ့ငယ်သူငယ်ချင်းရိုနဲ့ပြန်တွေ့ရာကနေအကုန်ပြောင်းလဲသွားပါတော့တယ် ရိုဟာသူ့ပါတနာဖြစ်သူပရော်ဖက်ဆာဖက်ကီရာနဲ့လေ့လာရေးတစ်ခုလုပ်နေတာဖြစ်ပြီး မကောင်းဆိုးဝါးတွေဟာလူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလူယောင်ဆောင်ကာရောနှောနေထိုင်ကြမှန်းသိသွားပါတော့တယ် ပရော်ဖက်ဆာဖက်ကီရာဟာတစ်ယောက်တည်းစတေးခံစမ်းသပ်မှုကိုသူ့ကိုယ်သူပြန်လုပ်ခဲ့ပြီး ကြိုတွေးထားတဲ့အတိုင်းမအောင်မြင်ခဲ့လို့ကိုယ်ကိုကိုယ်သတ်သေသွားပါတော့တယ် ပါတနာမရှိတော့တဲ့ရိုဟာသူရဲ့အယုံကြည်ရဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်သူ အကီရာ ကို အရေးကြီးတဲ့လူသားလုံးဆိုင်ရာမစ်ရှင်အတွက်အမြန်ပြန်ခေါ်ခဲ့ပါတယ် ဒါပေမယ့်အဲ့ဒီညမှာတင်ရိုဟာ မတော်တဆ အကီရာကို အဆိုးဝါးဆုံးDevilအဖြစ်ပြောင်းလဲစေမိသွားပါတော့တယ် ဧည့်ခန်းမှာအောကားကြည့်ပြီးပြန်ပိတ်ဖို့မေ့နေတတ်တဲ့ အကီရာ စကားပြောစရာလူမရှိလို့ဖုန်းမကိုင်တဲ့ အကီရာ လမ်းဘေးကြောင်လေးတစ်ကောင်သေတာမြင်သွားပြီး မကယ်လိုက်နိုင်လို့ရင်ကွဲမတတ်အော်ငိုဖူးတဲ့ အကီရာ အဲ့ အကီရာ တွေမရှိတော့ပါဘူး သူ့ရဲ့တစ်ဦးတည်းသောသူငယ်ချင်းကြောင့်အားလုံးပြောင်းလဲသွားပြီ မကောင်းဆိုးဝါးအချင်းချင်းတောင်ပြန်ကြောက်ရတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတစ်ကောင်သူဖြစ်သွားပြီ အကီရာကသူ့ကိုဘယ်လိုတာဝန်ယူမလဲ အခြားdevilတွေကရောဘယ်လောက်တောင်များနေလိုက်မလဲ အန်နီမေးဖင်တုံးကြီးတွေကရောဘယ်လောက်တောင်လှနေလိုက်မလဲ အထူးသဖြင့် အကီရာ ရဲ့ကာရိုက်တာဟာအလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလွန်းပါတယ် ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အစွန်းနှစ်ဖက်ကစိတ်ခံစားချက်တွေကိုထုတ်ပြထားသလိုပဲ မဖြစ်မနေကြည့်သင့်တဲ့စီးရီးမို့ကြည့်လိုက်ပါ အချိန်ကုန်ရကျိုးနပ်ပါလိမ့်မယ် <3 Episode 1 : Gdrive / Openload / Megaup Episode2: Gdrive /Openload / Megaup Episode3: Gdrive / Openload / Megaup Episdoe4: Gdrive / Openload / Megaup Episode5: Gdrive / Openload / Megaup Episode6: Gdrive / Openload / Megaup Episode7: Gdrive / Openload ...
Devilman: Crybaby (2018-)
The Protector (2018) Season 1 [COMPLETE] အရင်တုန်းကဆို Netflix က ဇာတ်လမ်းတွဲဆိုရင် တစ်ချို့က ဂျင်းလို့ကိုထင်တတ်ကြတယ်..သို့ပေမယ့် ခုနောက်ပိုင်းတော့ Netflix ဇာတ်လမ်းတွဲတွေဟာ တော်တော်ကြီးကိုကောင်းလာတယ်...ယ္ခုဇာတ်လမ်းတွဲဟာလည်း Netflix ရဲ့ ဂျင်းမဟုတ်ကြောင်းသက်သေပြမယ့် ဇာတ်လမ်းတွဲလို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူး...ဒီဇာတ်လမ်းတွဲဟာ ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ရက်၂၀၁၈ မှာစတင်ထွက်ရှိထားတဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲပါ... IMDB 8.5 ထိတောင်ရရှိထားပါတယ်...Istanbul မြို့မှာ ဖခင်ကို လုပ်ကျွေးပြုစုရင်း ဘ၀ကိုရိုးရှင်းစွာဖြတ်သန်းနေတဲ့လူငယ်လေးတစ်ယောက်ရှိတယ်...နေ့ရှိသမျှ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းဆိုင်လေးမှာ ဈေးရောင်းလိုက် ဖခင်လိုအပ်တာလေးတွေကူညီလိုက်ပေါ့...မြို့ကလည်း တိတ်ဆိတ်အေးချမ်းလို့... ဒီတိတ်ဆိတ်အေးချမ်းမှုတွေပြည့်နေတဲ့မြို့ဟာ တစ်နေ့တော့ ပျက်သုန်းရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်လာတယ်..အဲ့ဒါကတော့ မိစ္ဆာစိတ်အပြည့်ရှိနေတဲ့ မသေမျိုး ၇ပါးထဲမှ နောက်ဆုံးလက်ကျန် ၁ပါးဟာ မြို့ကိုဖျက်ဆီးဖို့လုပ်နေခြင်းကြောင့်ပါ...ဒီလိုပျက်သုန်းမယ့်အရေးကိုကာကွယ်ဖို့ ဒီလူငယ်ဟာ ရသမျှကိုယ်စွမ်းဥာဏ်စွမ်းနဲ့ကြိုးစားပါတော့တယ်..ကိုင်း မသေမျိုးဖြစ်နေတဲ့သူကို သာမာလူငယ်လေးတစ်ယောက်က ဘယ်လိုနှိမ်နှင်းမလဲ ဘယ်လိုကြိုးစားမလဲဆိုတာကိုတော့စောင့်ကြည့်လိုက်ပါဦးဗျို့... (ဘာသာပြန်တင်ဆက်ထားသူများကတော့ Thar NyoLwin နဲ့ Hein Zaw ဖြစ်ပါတယ်။) Quality – 720p NF WEB-DLDuration – 40min (@Episode)Subtitle – Myanmar HardsubFormat – Mp4Genre ...
TMDb: 7.9/10 13,334 votes
The Protector (2018) Season 1 [COMPLETE]
The Rain [season 1 (2018)] The Rain(2018) ============ အိုဇုန်းလွှာမတည်ငြိမ်မှုကနေ မိုးရေထဲမှာ လူတွေကိုမိနစ်ပိုင်းအတွင်းသေစေနိုင်တဲ့အထိဆိုးရွားလှတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေပါလာပါတယ် ကြိုသိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက မြေအောက်တိုက်ခန်းတွေဆောက်ပြီး ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ထားခဲ့ပါတယ် အဓိကဇာတ်ကောင်မောင်နှမနှစ်ယောက်ရဲ့အဖေဖြစ်သူဟာ ထိုအဖွဲ့အစည်းထဲပါနေပြီးတော့ သူ့သားနဲ့သမီးးအပါအ၀င် သူ့မယားဖြစ်သူကိုပါ မြေအောက်ခန်းဆီအန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ခေါ်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ် အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုကြောင့်သူတို့အဖေဟာ မိုးရေထဲကိုကာကွယ်ရေးဝတ်စုံအပြည့်နဲ့ ပြန်ထွက်သွားရပြီး သူတို့အမေဟာလည်း မမျှော်လင်ထားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကြောင့် မိုးရေနဲ့ထိသွားတဲ့ အခါမှာတော့.... အပိုင်း၈ပိုင်းထိပါဝင်ပြီးတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးတင်ပေးသွားပါမယ် Translated by : Shwe Yee OoEncoded by : Sithu EPISODE 1 : Yoteshin / Userdrive / Megaup / Upstream EPISODE2: Yoteshin / Userdrive / Megaup / Upstream EPISODE3: Yoteshin / Userdrive / Megaup / Upstream EPISODE4: Yoteshin / Userdrive / Megaup / Upstream EPISODE5: Yoteshin / Userdrive / Megaup / Upstream EPISODE6: Yoteshin ...
The Rain [season 1 (2018)]
Marvel’s Iron Fist Marvel Superhero စီးရီးတစ်ခု တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Iron Fist ဟာ Marvel Universe ရဲ့ အတော်ဆုံး သိုင်းပညာရှင်တွေထဲက တစ်ယောက်ပါ။ ဒီစီးရီးဟာ တီဗီစီးရီး ပရိတ်သတ်တွေအတွက်တော့ ကောင်းမွန်တာမို့ Ration 7.3 အထိ ပေးထားကြပေမယ့် Comic ဖန်တွေကတော့ အားရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီစီးရီးဟာ Iron Fist ဖြစ်လာတဲ့ ဒန်နီရန်းဟာ သူ့ရဲ လေ့ကျင့်မှုကို မပြည့်စုံသေးခင် စွမ်းအားအပြည့်မသုံးနိုင်သေးခင် စွန့်စားခန်းတွေ စတင်တဲ့ ဇာတ်လမ်းဖြစ်နေလို့ပါ။ Comic မှ Iron Fist ဟာ SHIELD အဖွဲ့ရဲ့ တိုက်ယာဉ်ကို လက်သီးတစ်ချက်တည်းနဲ့ ထိုးချနိုင်ပြီး၊ Spider man,Wolverine,Captain America နဲ့ Colossus တို့ကို တပြိုင်တည်း ယှဉ်တိုက်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ကြီးမားတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုကြီး ရမ်အင်တာပရိုက်ရဲ့ ပိုင်ရှင် လင်မယားနဲ့ သူတို့ရဲ့ သားငယ်လေး ဒန်နီရန်းဟာ လေယာဉ်ပျက်ကျပြီးပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒန်နီကို ခွန်းလွန်ဆိုတဲ့ လျို့ဝှက်ကျောင်းတော်ကြီးက ဘုန်းတော်ကြီးတွေက ကယ်တင်သွားပြီး သိုင်းပညာမျိုးစုံသင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအဖြစ်တွေ ဖြစ်ပြီး ၁၅ နှစ်အကြာမှာ ဒန်နီရန်းဆိုတဲ့သူဟာ ...
Mr. Sunshine ( Completed ) Netflix ကနေ ကျတော်တို့ အချစ်တော် မင်းသားကြီးလီဗြောင်ဟွန်းနဲ့ စီးရီးတစ်ခု စတင်ပြသလိုက်ပါပြီ။ထရေလာနဲ့တင် ရုပ်ရှင်ချစ်သူတွေ စိတ်ဝင်စားနေကြမှာပါ။မနေ့ညက အပိုင်း ၁ ထုတ်လွှင့်အပြီးမှာ အတော်များများ အကြိုက်တွေ့နေကြပါပြီ။ဇာတ်လမ်းကတော့ ၁၈၇၁ခုနှစ်ကာလကို အခြေခံထားပါတယ်။သမိုင်းနောက်ခံ ဒရာမာ အက်ရှင်အမျိုးအစားပါ။ဂျိုဆန်က အစေခံလူငယ်လေးတစ်ယောက်ဟာ.အမေရိကန်ကို ထွက်သွားခဲ့ပြီး အမေရိကန်မရိန်းစစ်သည်အနေနဲ့ ပြန်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။သမိုင်းနောက်ခံကာလကတော့ အမေရိကန် ကိုးရီးယားပဠိပက္ခဖြစ်ချိန်နဲ့ ဂျပန်က ကိုရီးယားကို သိမ်းပိုက်ဖို့လုပ်နေချိန်လောက်မှာပါ။တကယ့်သမိုင်းနောက်ခံတွေနဲ့ အရှုပ်တော်ပုံတွေကိုလီဗြောင်ဟွန်းရဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုနဲ့တွဲပြီး ခံစားကြည့်ရအောင်။ဒီဇတ်လမ်းတွဲကို ဘာသာပြန်ပေးထားကြသူတွေကတော့ThinZar Htet , May Thazin Soe , Cherry CoeNga Lunn , Hein That Naingတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်Encoded By Thit San Khant , LKDownload List ------------ EP 01 yoteshin/ userdrive (540MB)EP 02 yoteshin/ userdrive (510MB)EP 03 yoteshin/ userdrive (510MB)EP ...
Mr. Sunshine ( Completed )
GHOUL (2018) Season 1 [COMPLETE] Sacred Gamesနဲ့ အောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရခဲ့ပြီးတဲ့နောက် Netflixရဲ့ နောက်ထပ် Bollywood Series တစ်ခုထွက်ရှိလာခဲ့ပါပြီGhoul TV Series ဟာ သုံးပိုင်းသာပါဝင်တဲ့ Mini-Series တစ်ခုဖြစ်ပြီး အဓိကသရုပ်ဆောင်အနေနဲ့တော့ Netflixနဲ့ အကျိုးပေးတဲ့ Radhika Apteနဲ့အတူ Tumhari Suluထဲမှာ အာရွက်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ မင်းသား Manav Khaul တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွေအနေနဲ့ IMDB 8.2/10 အထိရရှိထားပြီး Horror, Thriller အမျိုးအစားလည်း ဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းကတော့ အိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးက တော်တော်ကြီးကို ပြောင်းလဲနေပါပြီဥပဒေတွေ၊ မူဝါဒတွေ၊ နိုင်ငံရေးအယူအဆတွေ၊ ဘာသာရေးအခြေအနေတွေနဲ့ အကြမ်းဖက်မှုများစွာလည်း ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ဒီထဲမှာမှ အဆိုးရွားဆုံးအကြမ်းဖက်သမားကတော့ အလီ ဆာအီးဒ် အလ်ယာကွဘ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြမ်းဖက်သမားကို အထူးတပ်ဖွဲ့တွေက ဖမ်းစီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဖမ်းစီးရရှိတဲ့အကြမ်းဖက်သမားတိုင်းကို အဆင့်မြင့် စစ်ကြောရေးဋ္ဌာနမှာ စစ်ဆေးလေ့ရှိပြီး ဒီအကြမ်းဖက်သမားကို စစ်ဆေးဖို့ နီဒါဆိုတဲ့ သင်တန်းဆင်း အရာရှိတစ်ယောက်ကို ခေါ်ခဲ့ပါတယ်နီဒါဆိုတာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တစ်ယောက်ဆိုပေမယ့် မျိုးချစ်စိတ်ရှိသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ...
GHOUL (2018) Season 1 [COMPLETE]
The New Legends of Monkey (2018) Season 1 [COMPLETE] အပိုင်း ၁၀ ပိုင်းသာထွက်ရှိထားတဲ ဒီစီးရီးလေးကို လူတိုင်းကြည့်ရှု့လို့ရအောင် အစအဆုံးတင်ပေးထားပါတယ်..ဒီစီးရီးလေးကတော့ Rating 6.6 ရရှိထားပြီး တရုတ်ကဖန်တီးထားတဲ့မျောက်မင်းအကြောင်းကို အသစ်တဖန်ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်… မိစ္ဆာတွေကြီးစိုးလာတဲ့ အချိန်မှာ မျောက်မင်းကဒီမိစ္ဆာတွေလက်ထဲကို ကျမ်းစာတွေကိုမရအောင် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ကထောင့်စွန်းနေရာတွေမှာ ကျမ်းစာတွေကို တစ်နေရာစီ မြှပ်နှံခဲ့ပါတယ်… ဒါပေမယ့် မိစ္ဆာတွေအင်အားကြီးစိုးလာတဲ့အချိန်မှာတော့ ဒီကျမ်းစာတွေကို ပြန်ရှာပြီး မိစ္ဆာတွေကို ပြန်လည်နှိမ်နင်းဖို့အတွက် အကြောင်းဖန်လာပါတော့တယ်…. အဲအချိန်မှာ မျောက်မင်းဟာ ကျမ်းစာတွေကိုခိုးယူတယ်ဆိုပြီး ကောင်းကင်ဘုံရဲ့အပြစ်ပေးခြင်းကို နှစ်ပေါင်းများစွာခံနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်… ဒါကြောင့် မျောက်မင်းကိုလွှတ်ပေးဖို့အတွက် တစ်ယောက်တည်းသော လူတစ်ယောက်က သူရဲ့ကံကြမ္ပာရဲ့အလိုအရ အတားဆီးတွေကို ဖြတ်သန်းပြီး မျောက်မင်းအပြစ်ဒဏ်ခံနေရတဲနေရာဆီကိုသွားပါတော့တယ်… ဒီစီးရီးလေးဟာ အရင်ကကြည့်ခဲ့ဖူးတဲ့ Journey To The West တို့လို ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ သြစတေးလျနဲ့နယူးဇီလန်တို့မှာ ရိုက်ကူးခဲပါတယ်…. Quality … 1080 WEB Running Time …. 24 Min Translator …… Arrow Team (MKN) Encoder …. Moe Myint LwinEpisode (1) Yoteshin Link/Openload Link/Mega Link Episode (2) Yoteshin Link/Openload Link/Mega Link Episode (3) Yoteshin Link/Openload Link/Mega Link Episode ...
The New Legends of Monkey (2018) Season 1 [COMPLETE]
Altered Carbon Netflix က TV Series တွေ ကြည့်ဖူးတဲ့သူတွေကတော့ သိမှာပါ netflix က TV Series တွေ ဆိုရင် ဘယ်လို ရင်သက်ရှုမောနေရအောင် ကောင်းလဲဆိုတာ 13 reasons why လို TV Series မျိုးကို Channel Myanmar ကနေ တင်ဆက်ပေးဖူးပါတယ် လူတိုင်း ရဲ့ စိတ်အာရုံကို ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့တယ် အခု Altered Carbon လဲ ထို့အတူပါပဲ ဒါပေမယ့် မတူတာက ဒီ TV Series ဟာ ၁၀ ပိုင်း ထဲ သာ ထွက်ရှိထားပြီး အပိုင်း တစ်ခုတိုင်း လိုလို ကိုယ်လုံးတီး အခန်းတွေ နဲ့ လိင်ဆက်ဆံတဲ့ အခန်းတွေ ပြည့်နှပ်နေပါတယ် ဇတ်လမ်းက အဲ့ဒီလိုကြီးလားဆိုတော့လဲ မဟုတ်ပြန်ပါဘူး အပစ်အခတ်တွေ သွေးသံရဲရဲ မြင်ကွင်းတွေကိုလဲ မြင်ရမှာပါ သေချာသလောက်ကတော့ ဒီ TV Series ကို မိသားစု နှင့် အတူမကြည့်သင့်ပါဘူး 21+ အဆင့်လောက် ညွှန်းပါရစေ.. ဇတ်လမ်းပုံစံကတော့ နာမည်ကြီးတဲ့ ကြေးစားသွေးအေး ...
Oh My Ghost IMDB...8.1,,,,Viki...9.4(အပိုင်း ၁+၂+၃+၄+၅+၆+၇+၈+၉+၁၀+၁၁) အပိုင်းသစ်(၁၂+၁၃+၁၄+၁၅)နှင့်ဇာတ်သိမ်းပိုင်း(၁၆) ​ ဒီတစ်​ခါ ၂၀၁၅ခုနှစ်​က ထွက်​ထားတဲ့ ရသစုံ ခံစားရတဲ့ drama ကား​ကောင်း​လေးတစ်​ကား ဖြစ်​တဲ့ oh my ghost ဆိုတဲ့ ဇတ်​ကား​ကောင်း​လေး တစ်​ကားနဲ့ မိတ်​ဆက်​​ပေးလိုက်​ပါတယ်​နာဘိုဆွန်းဆိုတဲ့ကောင်မလေးဟာ စားသောက်ဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်..သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာလဲဆိုတော့ မကောင်းဆိုးဝါးတွေကိုမြင်နေရတာပဲ...ဒီတော့ကောင်မလေးဟာ အရာရာကိုကြောက်ရွှံအားငယ်နေတတ်တယ်..သူ့ရဲ့အမူအရာတွေဟာလည်း သာမန်လူတွေနဲ့မတူပဲ ကွဲပြားနေတော့ သီးခြားအထီးကျန်ဆန်နေတယ်..ဒီလိုအမူအကျင့်တွေကြောင့်လည်း နာမည်ကျောင်စားဖိုမှူးလည်းဖြစ် စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်လည်းဖြစ်တဲ့ ကန်ဆန်းဝူဟာ သူမကိုသိပ်သဘောမကျဘူး.. .တစ်နေတော့ မတော်တဆမှုနဲ့သေဆုံးပြီး မကျွတ်မလွပ်တဲ့သရဲမဟာ နာဘိုဆွန်းဆိုတဲ့ကောင်မလေးကိုဝင်ပူးသွားတယ်...သရဲမဟာ လူ့ဘ၀တုန်းကလည်း ပြာကလပ်စိန်ဆိုတော့ သရဲဖြစ်တော့ ပိုဆိုးတာပေါ့ ...ထပ်ဆိုးတာက ခပ်အေးအေးနေတတ်တဲ့ နာဘိုဆွန်းပဲ... သရဲမ၀င်ပူးခံရတော့ ပြာကလပ်စိန်နာဘိုဆွန်းဖြစ်သွားတယ်...ပရ​လောကသားဆိုတာတကယ်​မရှိဘူး လို့ခံယူထားပြီး မာနအရမ်းကြီးတဲ့ ဘုဂလန့်လူ့ဂွစာ စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်နဲ့အဲ့ဒီမှာစတွေ့တော့တာပဲ.... ဒီကားက မင်းသားရောမင်းသမီးရောချောသလို ရယ်စရာလေးတွေ ရင်ခုန်စရာလေးတွေစိတ်လှုပ်စရားလေးတွေနဲ့ တကယ့်ကိုကြည့်လို့ကောင်းတဲ့စီးရီးလေးဖြစ်ပါတယ် အပိုင်းက (၁၆)ပိုင်းပဲရှိပါတယ် ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ဘာသာ ပြန်သူကတော့ Aye Nyein Thu ဖြစ်ပါတယ် File Size…(700 MB)And(320MB) @EpisodeQuality…HDTV Rip 720pFormat…mp4Duration…00:65:00 @ ...
TMDb: 8.2/10 46 votes